Ushuaia မာလ်ဗီးအာဂျင်တီးနား Intl လေဆိပ် DOWNLOAD FSX & P3D - Rikoooo
အရွယ် 216 ကို MB
downloads ရယူရန္ 8 257
Author: SIMARG - Simulacion အာဂျင်တီးနား
ပြောင်းလဲမှုမှတ်တမ်း installer version ကို update လုပ် 10.1
အဆိုပါ 3D အဆောက်အအုံများအပါအဝင်အာဂျင်တီးနားအတွက် Ushuaia ၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ဓာတ်ပုံအစစ်အမှန်ရှုခင်း။ Photo-အစစ်အမှန်ဧရိယာပတ်ဝန်းကျင်တောင်ပေါ်ကိုတက်ဆန့်သည်။ အဘယ်အရာကိုမျှသဟဇာတ, ပိုကောင်းတဲ့ဒီရှုခင်း၏အရည်အသွေးကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်အာဂျင်တီးနားထုတ်ဝေသူဖွငျ့ဗီဒီယိုတစ်ကားထက် သာ. ကောင်း၏ FSX နှင့် P3D.
Ushuaia ၏နိုင်ငံတကာလေဆိပ် - မာလ်ဗီးအာဂျင်တီးနား (IATA: USH • ICAO: SAWH), အများအား Ushuaia လေဆိပ် (စပိန်: Aeropuerto Internacional က de Ushuaia မာလ်ဗီးအာဂျင်တီးနား) လို့ခေါ်တဲ့ Tierra del Fuego, အန္တာတိကနှင့်တောင်၏ပြည်နယ်အတွက်, Ushuaia တွင်တည်ရှိသည်တစ်ဦးလေဆိပ်သည် အာဂျင်တီးနားတွင်အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာကျွန်းများ။ သူ၏အခြား codes တွေကို FAA: USU နှင့် INTL: SAWH ။ နိုဝင်ဘာလ 27, 1995 ဖွင့်လှစ်, စစ်ဆင်ရေးလန်ဒန်ထောက်ပံ့ရေးအားဖြင့်သိနိုင်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအာဂျင်တီးနားအတွက်တောင်ဘက်လေဆိပ်ဖြစ်ပါတယ်။ 2009 ခုနှစ်, 535,692 ခရီးသည်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါသည်။ ဒါဟာအထူးသဖြင့်သြစနွေရာသီကာလအတွင်းအန္တာတိကခရုဇ်သင်္ဘောများဦးတည်ကြသူအားလုံးလူမျိုးပေါင်းစုံ၏ခရီးသွားဧည့်သဖြင့်အသုံးပြုသည်။ (ရင်းမြစ်ဝီကီပီးဒီးယား)
Sunskyjet Philadelphia တွင် Intl KPHL FSX & P3D 1.0
အယ်လ် Calafate SIMARG FSX & P3D